Abahlali base-Limpopo bayazitika ngezikhonyane ezidalwe ngumonakalo wezikhukhula | Scrolla Izindaba
Abahlali base-Limpopo bayazitika ngezikhonyane ezidalwe ngumonakalo wezikhukhula
Izikhukhula ezisanda kwenzeka e-Limpopo zidale umonakalo omkhulu, kodwa kweminye imiphakathi yasemakhaya kube isibusiso esifihlekile.
Izimvula zilethe inqwaba yezikhonyane – umthombo wamaprotheni – kanye nendlela enhle yokwenza imali!
Nganoma yiluphi usuku, amaqembu abesifazane angena ezihlahleni eziseduze eyofuna izinambuzane ezinambithekayo, bagcwalise amasaka abo ngokwanele bona nezihlobo zabo.
URendani Madadzhe wase-Sibasa, e-Thohoyandou, ongumama wezingane ezimbili uthe, izingane zakhe azilali zingadlile futhi wenza inzuzo ngokudayisa izikhonyane.
“Kulokhu okuncane esikuthola kwizibonelelo zezingane sikwazi ukuthenga izidingo eziyisisekelo kuphela ezifana nempuphu kanye nensipho. Inyama iyabiza,” kusho yena.
Uthe, basebenzisa amathoshi kanti futhi nezinsuku azifani ngoba kwesinye isikhathi bagcwalisa amakhilogremu afinyelela kwayisihlanu anele ukondla umndeni wakhe nokuwadayisa.
Isikhonyane besilokhu siwukudla okuyisisekelo emiphakathini eminingi yasemakhaya e-Limpopo kodwa sanyamalala selokhu kwafika amadolobha.
Kulula ukuzipheka njengoba zomiswa, zigcinwa entuthwini noma zithoswe.
UDorothy Makhesa wase-Vhufuli, ongumama wezingane ezine, uthe sekuphele cishe inyanga bedla izikhonyane.
“Kwesinye isikhathi ngike ngivune cishe u-2kg. Zimnandi, zinempilo futhi azinawo amafutha,” kusho yena.
Isazi sokudla uSirah Dubois uthe, izikhonyane zigcwele ngobuningi futhi zingahamba amabanga amade futhi zidale umonakalo omkhulu ezitshalweni.
“Nokho emazweni amaningi ase-Afrika, iphakathi koMpumalanga nase-Asia, izikhonyane zithathwa njengesibiliboco futhi zidliwa ngobuningi,” kusho uDubios.
“Isikhonyane siwumthombo omuhle kakhulu wamaprotheni futhi sinezinhlobonhlobo zama-fatty acid namaminerali. Izikhonyane ziwumthombo obalulekile wokudla emazweni amaningi.”